Iipuzzle ezili-13 eziPhambili zeJigsaw 2021-Uninzi lweePuzzle zeJigsaw - Ukonwaba Ekhaya
Iipuzzle ezili-13 eziPhambili zeJigsaw 2021-Uninzi lweePuzzle zeJigsaw
Iipuzzle zejigsaw ayisiyonto imnandi nje, yokuphumla umsebenzi onokuwenza ekhaya ndedwa, okanye ngoncedo lwabahlobo kunye nosapho. Khetha iphazili entle, kwaye uya kuyila umsebenzi wobugcisa kwinkqubo. Ngokukrakra-zininzi iiphazili phaya ezifanele ukusekwa wakuba ugqibile. Ukuba unqwenela ungayifumana iphazili yejigsaw kanjalo ifanele isitayile sakho, unethamsanqa. Ezi iipuzzle ezintle ziyonwabisa ukugqibezela njengoko ziyamangalisa, nokuba ujonga umsebenzi olula oza kuthatha iyure okanye ucelomngeni onokuthi usebenze kancinci ngexesha lakho lasimahla. Kwaye xa ugqibile, sikugubungele ngokufumana isakhelo, nawe.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Amashumi amaninzi kunye neGradient Puzzle Set ukutya52.com$ 40.00 THENGA NGOKU
Le seti yeephazili ezimbini ezidibanisa iphazili enemibala (iziqwenga ezili-100) yi-Areaware kunye nokukhethwa kwiziqwenga ezingama-500 nguDusen Dusen, inkampani eyolukiweyo eyaziwa ngokuba ziipateni ezinesibindi, zejiyometri.
Mbini I-Puzzle yeSucculents yamacala amabini ivenkile.com$ 15.99 THENGA NGOKU
Nasiphi na isithupha esiluhlaza siyakuxabisa esi siqwenga sama-500 sepuzzle segadi, enamacala amabini aphindwe kabini okonwaba (kwaye kabini umceli mngeni.)
Iingcamango zethayile yangasese 2020
3 Iphazili yeGeode uncommongoods.com$ 60.00 THENGA NGOKU
Nganye yezi iiphazili ezimile kakuhle ze-geode ineziqwenga eziphakathi kwe-160 ne-180.
4 Iipuzzle zokutya ezincinci Indawo yendawo ukutya52.com$ 45.01 THENGA NGOKU
Ezi iiphazili ezincinci zilungele konke ukutya okusuka phaya, kunye neenketho ezinjengeziqhamo kunye nemifuno, ukutya okuphakathi kobusuku, ii-cocktails kunye nokunye. Kwaye nganye nganye ithatha imizuzu engama-20 okanye ngaphantsi ukuyidibanisa.
5 IBerlinMagalog Puzzle jiggypuzzles.com$ 49.00 THENGA NGOKU
Ayisiyiyo kuphela le phazili ye-1000, ebonisa isiqwenga sobugcisa esibizwa ngokuba yi-'BerlinMagalog ngu-Diana Ejaita, esiza kwiipakethe ezintle kakhulu, iza neglue ukuyigcina njengobugcisa ngokulula.
umhombiso eludongeni lwegumbi lomntwana
6 Imilebe yePuzzle UJonathan Adler trouva.com$ 30.00 THENGA NGOKU
Le phazili ye-chic engama-750 kaJonathan Adler yenzelwe imilebe kunye nomsi ojikelezayo.
7 Ipuzzle kaKeith Haring yincoma.org$ 35.00 THENGA NGOKU
Ukuba uyawuthanda umsebenzi wobugcisa kaKeith Haring, uya kuyithanda le puzzle-iqhekeza elimnyama nelimhlophe eli-500 eligcwele imizekeliso yakhe.
8 UFrank Lloyd Wright Gold Foil Puzzle IGalison amazon.com $ 19.99$ 13.10 (34% icinyiwe) THENGA NGOKU
Le intle, isiqwenga sephazili esi-1 000 sibonisa iifomu ze-Saguaro zikaFrank Lloyd Wright kunye nemizobo yeCactus yeentyatyambo eneenkcukacha zeefoyile zegolide.
9 I-Puzzle ye-Astrology yePhepha barnesnoble.com$ 12.59 THENGA NGOKU
I-Astrology buffs iya kuyithanda le phazili yesiqwenga se-1,000 esibonisa imiqondiso ye-zodiac kwifoyile yegolide ngaphezulu kwendawo enombala ongasemva.
10 Ulwandle I-Puzzle yamacala amabini imvi.com$ 25.00 THENGA NGOKU
Abathandi bokufota baya kuwuxabisa umceli mngeni wale phazili inamacala amabini eyenziwe ngumsebenzi kaGrey Malin.
imihombiso eludongeni yegumbi lokuhlala
Shumi elinanye ENew York, eNew York Puzzle galison.com$ 16.99 THENGA NGOKU
Iphazili ye-1,000-piece yenziwa kwisiqwenga sobugcisa esibonisa isiXeko saseNew York ngumzobi wokwenene uVincent Giarrano.
12 UMichael Storrings iPuzzle yeParis galison.com$ 16.99 THENGA NGOKU
Ukhetha iParis? Uthuthele kwisiXeko sokuKhanya ngeli phazili lamawaka, elibonisa ubugcisa bokubonisa uMichael Storrings.
13 Iphazili eyenzelwe wena YakhaYourOwnGift etsy.com$ 19.99 THENGA NGOKU
Ukuba akukho nanye kwezi puzzle zithetha nawe, yenza isiko elinye kwifoto oyikhethileyo. Ngaphandle koko, yenza isipho esikhulu!
UBrittney Morgan Umhleli weNtengiso, iNdlu entle UBrittney Morgan ngumhlaba owaziwayo kunye neVirgo ene-penchant yezandla, imilebe ebomvu, kunye nokuthenga iindlela ezininzi zokuphosa imithwalo.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Itshathi yemibala yepeyinti ye-valspar
imibala ehambelana nombala obomvu
kangaphi umthi wemali wamanzi
iwindow yekrisimesi yefestile